Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:25am-2:30pm
Lambarka Taleefanka 617-635-1660
Orchard Gardens K-8 Pilot School wuxuu ardayda oo dhan u ballan qaadayaa waayo-aragnimo waxbarasho oo xoogan,oo lagu bixiyo jawi qiimeeya oo u dabaal-dagaya xiriirka adag ee ardayda, shaqaalaha, qoysaska, iyo bulshada. Dhammaan ardayda waxay ogaan doonaan awoodda ay u leeyihiin in ay meel gaari karaan, loona fidiyo koobcin oo kala badan si ay si buuxda ugu diyaargaroobaan guusha kuleejka iyo xirfadda.
Tiro badan oo barnaamijyada dugsiga kadib ah, sida Naadiga Wiilasha iyo Gabdhaha/City Year, Citizen Schools (qasab ku ah fasalada 6-8); America SCORES soccer iyo barnaamijka wax qorista, ciyaaro iyo naadiyaal (uqalmidu waxay kuxirantahay sooxaadirista ardayga ee dugsiga iyo buundada uu keeno).
Surwaalada buluuga ah ama goono oo wadato shaati kuleeti jaale leh (K-5). Surwaal Kaakiga ama goono cad, buluug ama jaalle ah oo kuleeti leh (6-8). funaanad buluug xigeen, funaanad dhajiska, ama funaanad gabdheed koofiyad leh oo Buluug ah/goono oo wadato shaati kuleetigiisa jaalle ah (K-5) surwaal Kaakiga/goono cadaan ah, jaalle ah, jaalle ama buluug ah.
Waxbarasho tayo leh oo la baraayo Dhammaan ardayda (EFA) fasalada 4-6